Ururka Isbahaysiga Soomaalida waa ku fashilmay difaaca danaha Soomaalida Sweden | Somaliska
Ururka Isbahaysiga Soomaalida Sweden (Somaliska Riksförbundet) oo lagu tilmaamo in uu yahay mid ka shaqeeya danaha iyo midnimada Soomaalida Sweden ayaa ku fashilmay difaacada danaha Soomaalida. Ka dib markii ay soo baxday bishii hore in xildhibaanad ka tirsan xisbiga Vänsterpartiet ay dayaacad ka faafisay Soomaalida ayaa waxaa arintaas si weyn uga dhiidhiyay Soomaalida Sweden guud ahaanteen, marka laga reebo ururka oo dhagaha ka furaystay arintaan.
Hadda ayay soo daabaceed warqad ay ku dalbanayaan in haweeneydaan laga ceyriyo xisbiga balse jawaabtaan ayaa ah mid si weyn u soo daahday isla markaana imaanaysa xili layska hilmaamay dhacadadii. Arintaan ayaa sidoo kale muujinaysa habacsanaanta ka dhexjirta ururkaan oo ku mashquulsan sidii ay u qeybsan lahaayeen xoogaaga dhaqaalaha ah ee ka soo xarooda mashruucyada magac u yaalka ah ee sameeyaan iyo soo dhaweynta siyaasiyiinta qabiiliga ah ee Somalia balse markii ay timaado arin dhab ah oo u baahan midnimada iyo firfircoonida Soomaalida Sweden aysan isku hawlin.
Xubno ka tirsan ururka ayaa ku dooday in aysan dooneyn in si “cadiifadaysan” ay arintaan uga jawaabaan balse ay sameeyeen arin diplomaasiyad ah oo ay xiriir la sameeyeen xisbiga Vänsterpartiet oo ay jawaab ka sugayeen. Hadalkaasi ayaa ah mid aan la aqbali karin waayo arintaan waa mid cadiifad u baahan, waa mid u baahan in degdeg loo cambaareeyo oo laga gilgisho balse taasi ma aysan sameyn ururka. Xitaa way ku fashilmeen diplomaasiyadii maadaama xisbigu uu ka diiday ay la kulmaan isla markaana ay haweeneydii ay wali xisbiga xubin ka tahay.
Haddii ururka SRFS uu doonayo in uu matalo Soomaalida Sweden waa in ay sameeyaan isbedal xaga hawsha ah, waa in la arkaa wax qabad muuqda oo aysan ku doodin waxaan wadnaa hawl qarsoon. Soomaalidu nacas ma ahan oo waa ogyihiin qofkii wax qabta iyo midkaan wax qaban. Jaaliyado ayaan isku keena iyo mashruucyo ayaan wadnaa aan faa’iido u lahayn danaha Soomaalida mid soconaysa ma ahan. Markii eed loo jeediyo in ay ku doodaan dad agenda qarsoon wata ayaa weerarka nagu hayo taasina marmariso noqon mayso.
Soomaali iyo ajaanib lugu qabtay qaad iyadoo soo gelinaya dalka Noorweey
C/Risaaq Waaberi oo hadalkiisii sharaxay
somali baan ahay says:
somali waa ducuf meel kasta oo ay joogan bahdil uunbay ku nool yihiin walaahi xataa suriyaankii shalay wadanka yimi ayaa dhama oo dalkii iyo dadkiiba la qabsaday oo nidaamkii fahmay lakiin somali maxay hadlaanba luuqadii bay dhinteen iyo is dhex galkii wadanka aqoona malaha waa dad yaacaya uun maxaan cunaa yaab
May 3, 2016 at 22:49
soomaali haday wax tahay wadankeeni nagama eey dumiseen. mida kale waa dad dalkoodi iyo dadkoodii oo dhibaateysan oo naxariis iyo wax qabad uga baahan garab istaagi waayey miyaa dad swedan oo nabada ah ku nool wax u qabaneysa. u qabanmeyso anagana kama sugeyno.
May 4, 2016 at 00:19
Somali hadaan nahay dadka anaga iskula fiican, lakin xaqiiqdu taas waa ka fogtahay, Qofka bini’aadamka hadii uu ogyahay ceebtiisa iyo meelaha uu ka liito wuxuu sameyn karaa is baddel.
Laakiin qofka aan ogeyn, iskulana fiican caalamka ayaa ugu daran, waligiisna meel ma gaaro, Ururkan la sheegayo iyo kuwa kale oo badan waa calashood u shaqeestaal, sumcad iyo karaamo xitaa meesha ay joogan kumalaha, iyaga codad iyo dad kororsi lagaga raadsan Somalida maalmaha doorashooyinka.
Somaliyey muraayada isku eega meel walba joogtaan, nafteena aan runta u sheegno, waxaan nahay ummada aduunka ugu liidata, Ilaahow naga saar waxaasi oo kaliya wax kuu qaban mayso. Aan la nimaano ficil, Ilaahay irsaaqada waa noo balan qaaday, laakiin ficil la imoow ayaa ka horaysa, Ilaahay ilmo waa ku siin karaa, laakiin ficil la imoow yaa ka horaysa.
Ducada iyo ku xirnaashaha Rabi waa lagama maarmaan laakiin wax aan ficil laheyn iyo rabitaan laheyn meel ma gaaraan.
Waan idin jeclahay walalahay Somaliyeed, Inaga oo wax noqona in aan arko jeclahay oo kaliya, la’aantiin anigana waxba ma noqon karo, idinkana sidoo kale.
May 13, 2016 at 13:10
qalad ha ku sixina qalad si sharci ah isu difaaca laabla kac iyo hadal micna la aan ah waa midka halkaa ina dhigay ha loo fiirrsado waxa la isku difaacaayo